Global Voices teny Malagasy » Shina: Tsy misy mpisolovava ho an’i Hao Wu · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 19 Oktobra 2018 17:05 GMT 1	 · Mpanoratra John Kennedy Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Mediam-bahoaka, Vaovao Mafana, Zon'olombelona
Tsy homena fahafahana hanana mpisolovava i Hao Wu, ilay blaogera ao Beijing na Bust izay tazonina tsy araka ny lalàna, toy ny asehon’ ny lahatsoratra nivoaka tamin'ny 17 Mey ao amin'ny blaogin'ny anabaviny, i Nina, izay handraketany ny faniriany feno hakiviana mandrakariva amin'ny fitadiavana ny rariny ho an'ny zandriny lahy, Haozi, izay hita eto  ny fandikana azy.
Tamin'ity tolakandro ity, naharay antso tampoka avy amin'ny Serzà Zhang izay efa nihaonako tany aloha tany aho. Niriany ny hidinako ho any amin'ny birao fanadihadian'ny polisy mba hihaona, mba hanomezana valinteny ahy amin'ny fakàna mpisolovava. Tao anatin'ilay efitrano kely tamin'ny farany iny ihany, mbola niaraka tamin'ireo polisy roa ihany, nanome ahy ny fanapahankevitry ny Departemantan'ny Polisy ao Beijing amin'ny fakàna mpisolovava ho ana fitsarana savaranonando efa navalona (2006) #1 izay nisy soratra hoe ”…araka ny Toko faha-96, andalana voalohany ao amin'ny lalànan'ny raharaham-pitsaran'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Shina, taorian'ny fandinihana, ny fanapahankevitra dia ny hoe tsy mahafeno ny fepetra tokony hakàna mpisolovava ilay tranga.” Na dia teo aza izany valinteny efa niomananay izany, tena mbola very foana aho. Taorian'ny nisisihana be toy ireny, toa voasarona avokoa ireo ezaka rehetra mba hahazoana fanampiana avy amin'ny lalàna.
Efa nafindra avy any am-ponja ho aminà trano voaara-maso i Haozi amin'izao fotoana izao. Toy ny voalazan'ny lalàna, enim-bolana no fe-potoanan'ilay trano voaara-maso, tokony hanome valinteny ho an'ny fianakaviana mialohan'ny volana Aogositra ny polisy. Fa valinteny toy inona anefa izany? Hoe efa nahita fiampangana azy amin'izay ve mba hidirana amin'ny dingam-pitsarana? Tsy afaka manao afa-tsy ny miandry fotsiny ny fianakaviana. Afaka manampy vondrona bitika kely toy izany hiatrika ”Ny Andrim-panjakam-Bahoaka ve ny lalàna?’
Tsy misy fanazavana amin'ny fitazonana olona an-tranomaizina mandritra ny fotoana ela be toy izany ary ny amin'ny tsy alàlana ny mpisolovava ho afaka hirotsaka an-tsehatra. Tena mahatsiaro tena tezitra manoloana ny zava-misy tsy afa-manao na inona na inona ankehitriny aho. Maro ireo namako naneho ny ahiahiny tato ho ato. Azo antoka fa sahirana manao izay vitany ho an'i Haozi avokoa ny rehetra. Na dia tsy manana paikady mazava aza aho, raha mba afaka nifankahazo daholo ny rehetra, tsy mba afaka hiara-hiasa ve isika rehetra? Tsy maintsy mahita lalan-kizorana isika.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/10/19/127550/